Pavel Durov, kuze kube muva nje Jikelele Umqondisi "VKontakte" futhi uMdali yokuxhumana kwegama elifanayo, ubelokhu umangalele ukuthi ukubukela Amakhasi zabanye abantu bekulokhu futhi kuyoba engaziwa ngokuphelele. Nakuba kunezinkolo inani elikhulu izicelo, okuyinto amathrekhi ikhasi khona, ukukhomba indlela abantu ababheka ngayo ulwazi kanye lephrofayela oluyisisekelo izithombe, futhi yini isikhathi kwaba le umatasa, kwakungenakwenzeka. Ngesinye isikhathi esededelwe, abanye abasebenzisi ngaqala ukubona ulwazi mayelana khona izibalo kukhasi labo ukuthi imidwebo inikeza ulwazi oluyisisekelo mayelana abantu abavakashele ikhasi okwesikhathi esithize, geography, kanye neminye imininingwane ukuvakashelwa. Indlela yokubhekana "VKontakte" ikhasi Izibalo, ukuthi umsebenzi, kungani idingeka futhi atholakale kuwo wonke umuntu?
Bheka ikhasi khona "VC" Manje kungenzeka?
Naphezu ukuvela ikhono ukulandelela ulwazi mayelana iphrofayela "ukuvakashelwa kwekhasi VK", surfing Inthanethi kanye ukuphequlula Imininingwane ligcina lingaziwa. Umsebenzi ukuqoqa idatha yezibalo maqondana izivakashi, iza iphrofayli womuntu, inikeza ezihlukahlukene idatha okuwusizo mayelana izilaleli onekareko akhawunti yomsebenzisi. Kuyasiza ukuqapha izinguquko kulezi "izinkomba ukuthandwa" kwekhasi, njengoba ukuzimisela Inani labasebenzisi abehlukile futhi izivakashi eziningi. Kanjani ukubona izibalo ikhasi "VKontakte"? Inkinobho uqondisa esigabeni efiswayo ingumuthi ekhasini lephrofayela main, ngaphansi kwesithi "Umsindo". Ukuze ukuqoqa izibalo umsebenzi waphenduka ngokuzenzakalela ku, umuntu kudingeka "ushayele 'a ababhalisile engamakhulu ekhasini lakho. Yini idatha enikeziwe?
Indlela wokufunda izibalo
Ukuthola lapho ukubona izibalo ikhasi "VKontakte", udinga ukwazi ukuthi ukuqopha idatha enikeziwe. Imenyu siqukethe kwamathebhu ezintathu: "Inani lababa khona", "Ukufunda" futhi "Kuyasebenza".
Ababekhona - ubonisa umsebenzi amalungu angaphandle ngenxa ukubhalisa kwabo / impendulo esisemthethweni asuka kukhasi, ukuthuthela izigaba kwangaphakathi sephrofayela. Imenyu ukudalula ulwazi mayelana ukuphi "izivakashi": lizwe kanye kwedolobha lapho abasebenzisi bavamise akhawunti.
Ukusabalala - isingeniso ulwazi yokubuka okuthunyelwe kwalo izikhangiso ezindabeni.
Umsebenzi - ihlinzeka sokuqhafaza nokuhlinzekwa kolwazi mayelana ukusabela kwabantu ukuthumela okuqukethwe.
ukuvakashelwa abahlukile umsebenzisi ukuseshwa ku-akhawunti yakho imizuzu okungenani ezimbili. Izibalo olukhombisa ukuthi bangaki abantu uvakashela ikhasi bebonke. Idatha khombisa ubulili nobudala iqembu labantu abavame sinake yephrofayela, usivakashele. Futhi, umsebenzisi angabona, abantu zazo amazwe beza ikhasi yakhe ngokuvamile kuso sonke isikhathi i-akhawunti, noma ngokukhetha isikhathi esithile (yinyanga, yiviki, usuku). Ngokukhethekile idatha kungenziwa okwethulwa ifomu graphic. Ngakho, esibhekana ngayo lokho ifana "ikhasi Izibalo" umsebenzi VKontakte ". Ngikubheka kanjani ukuba kwami ulwazi olufanayo emiphakathini ehlukene?
Kukho konke, iqembu ukuhlaziywa noma izinkomba izibalo zomphakathi kakhulu efana nendlela ikhasi zokubuka abakhona "VKontakte". Ukwazi kanjani ukubheka izibalo ikhasi "VKontakte" nokuqonda injongo yalezi idatha, singacabanga kanjani isithakazelo abasebenzisi ukuthi lokhu siyohlala njalo ezingqondweni kanye impendulo esuka izilaleli. Ngokufanayo, izibalo iqembu libonisa inombolo ukuguqulwa kanye inombolo yezivakashi ezahlukile, bahlukaniswa ngobudala, ubulili kanye nendlela womhlaba, ubonisa umsebenzi wabo, futhi linikeza ulwazi imithombo ukusuka traffic kakhulu eqenjini ikhasi. Konke lokhu idatha angakunika isithombe oluphelele lwazo izethameli eziqondiwe, yingakho nabaholi team kubalulekile ukwazi ukuthi ukubuka izibalo ikhasi "VKontakte".
Kungenzeka yini ukulandelela "izivakashi" Amakhasi "BK"?
Naphezu ukubukeka umsebenzi ezifana "izibalo ikhasi" VKontakte ", indlela ukubheka futhi ubone eyayibheke nge-akhawunti yakho nganoma isiphi isikhathi inikezwe? Ngeshwa noma ngenhlanhla, ukuphathwa samanje ukuxhumana nomphakathi ayishintshi Vector lentuthuko hhayi ezisheshayo ukudalula imininingwane mayelana ukuvakashelwa yabasebenzisi Amakhasi zabanye abantu. Izicelo ezinikeza izinsizakalo ezifanayo, ngokuvamile nje okubili ulwazi mayelana nemisebenzi ukuthi umuntu ingabonwa ku "Izimpendulo", futhi ukuphequlula okwamanje Amakhasi "EKR unhlangothi "uhlala abangaziwa.
Indlela wenze iphrofayela nice Steam: imanuwali
Imiyalelo: Uma iphasiwedi ukhohliwe kusukela "Instagramma" yini okufanele uyenze esimweni esinjalo,
Yekuchumana mayelana uyilanda kanjani SIFCO
Njengoba "Vkontakte" fihla isiqophi: Imiyalelo
Maori: aboMdabu eNew Zealand
Saudi Arabia ezikhangayo, ezokuzijabulisa nokuzilibazisa
'40 lomshado - kungcono ukuthi umshado? Izipho siyakuhalalisela kuya 40 weminyaka le usuku lomshado
Tatar ophaya anyanisi oluhlaza neqanda
Izakhiwo Civil ukuzivikela: ngezigaba, izinhlobo
Portrait izithombe: imithetho eyisisekelo kanye nezincomo
Imibono Eminingi Boris Vian hoaxer
INjabulo Turkish - ukuziqhenya kazwelonke ye-Turkey